Izinto ezazisetyenziselwa ukubhalwa kwiindawo eziphezulu ziba yimpembelelo yezidakamizwa ze-psychotropic eziqulethe iintlobo zeefungi. Kodwa ngokumalunga nomnye wabo kwimenyu yethu, yonke into ayinakunyakaziswa. Izondlo ziye zazimisela ukuba ngamandla aphantsi le mveliso inikwe ixabiso eliphezulu lokutya.
Bafika kwisigqibo esivumelanisiweyo: aba bameli befom ekhethekileyo yobomi baya kuba luncedo kubo bonke abathandayo malunga nomfanekiso. Ngama-90% aquka amanzi, isiqingatha somba owomileyo kwiakhawunti kunye nama-carbohydrates. Ngama-mushroom kuncinci - iivithamini (inxalenye yeqela B, kunye neD), landela izinto (kuquka i-calcium, i-phosphorus, insimbi, iodine, i-magnesium), i-amino acid. Endaweni yesitashi, yi-glycogen. Esinye isizathu sokuba bachazwe ebukumkanini obuhlukile. Ukusetyenziswa kwamakhowe, iimpawu zonyango - umxholo wale nqaku.
Kukho i-fiber - chitin. Iqine ngaphezu kwe-cellulose, kwaye kungcono ukuhambelana nokudla, ukucutshungulwa kokucoca kukunconywa (ubuncinane - ukugaya ngokucokisekileyo). Mhlawumbi, amaxesha amaninzi kwiindlela zokupheka zivela kuma-mushroom (ngokubunjwa kwama-amino acids, ngokubanzi zifana neenkukhu zenkukhu). Ephantsi kancinci kubo ngokwexesha lokusetyenziswa kwee-mushroom ze-oyster (nazo ziyi-oyster mushrooms). Ama-chanterelles, ama-mushroom, amakhowa, ama-mushroom, ama-mushroom, i-morels ziguqula ietafile zethu. Yintoni ehambelana nama-mushroom, ngoko ke iyiphunga elimnandi. Unikwa amafutha abalulekileyo, iinkokheli ezikwimeko apho indawo yokuqala i-truffle. Ukongezelela ekubeni luncedo kwiigourmets, ukutya okunciphisa umngcipheko we-osteoporosis kunye ne-anemia. Kukulungele ukuwancedisa ngePalta ye-pasta. I-pinch yamaphiwa e-mushroom kwifom eyomileyo iya kunika iphunga elikhethekileyo lesobho. Abaqhelanisi bezityalo bayazi iindlela ezahlukeneyo zokwenza ama-mushroom: amatsha, ahlambulukile, anomileyo, angenakunqotshwa, ngolu hlobo lwesigxina esiphezulu seesitya zokuqala okanye ukuzaliswa kwepiyi Izinketho azikwazi ukucatshangelwa.
Kodwa ukuba u-coronate, ngokuqinisekileyo u-boletus. Ungumngcwabo omhlophe. Igama linikwe kuye kwipropati yokuhlala emhlophe, nangona xa kupheka. Inyama yayo ayitshintshe umbala kwi-cut. Kuzo zonke ezi zibonakaliso eziphezulu kakhulu zolawulo lweNdalo, eziphethe izakhiwo ezingenasondlo kunye nesinambatho. Ixesha lokuvuthwa nokuvuna kwamakhowe liwela ehlobo nasekwindla. Kulula ukupheka. Unokwenza usebenze ngokugqithisileyo okanye kwi-saladi, ioli yeoli yomnqumo emancinci, inqabile ngeviniga ye-balsam, ityuwa kunye nepelepi. Ukufumana ukuba i-fungus emhlophe ilungile, kufanelekile ukuthelela ngokukhawuleza kwinqwelo okanye umlenze. Ukuncibilika kuya kuphendula i-iridescent, icacile kunye neyonyana. Ngenxa yoko, i-fungus ihamba phambili ebomini. Ukuba iminwe ishiya i-dent, le khetho ayikufanelanga - yindawo yokukhulisa abazukulu-borovit. Ukulungiselela iinjongo zokutya, fumana iikopi ngokutsha. Amakhowe aseMhlophe afumaneka kwinqabileyo yezilwanyana zezilwanyana. Iifom, nazo ziphakathi. Ngaphandle, akunakwenzeka ukucacisa ubukho balaba bantu abangabonakaliyo. Kodwa ukuba uphakamise ingubo, waphawula izimbobo ezincinci, qiniseka - awuyena owokuqala ukugqiba.
Bathi i-boletus ikhula ngokugqithiseleyo ngexesha lombethe, kwaye le nkolelo yabantu isondele kwi nyaniso. Kubalulekile ukujonge ehlathini elikufuphi ngosuku olulandelayo emva kokuba imvula iqiniseke. Kodwa unako ukucima nokuphonsa i-mushroom kwibhaksi kuphela xa uyayiqonda. Kwaye ngoku sekuyisikhathi sokuqhubela phambili kwinqanaba elihle lebali - zokupheka ezivela kwi-chef. Ungazibali iindlela zendlu zokuvavanya amakhowe: upheke kulabo abashiya ngokungathandabuzekiyo
• 100 g ye-boletus
• 20 g yebhotela
• 100 g encinci yeengqolowa
• ilitha 1 yamanzi
• ama-clove amathathu
• 2 tbsp. ipofile yeoli yomnquma
• ityuwa, pepper
Sika ii-mushroom zibe ngamacwecwe amancinci, gazinga emnqumlezweni kunye nebhotela. Lungisa i-polenta: ubilise ingqolowa kumanzi anetyu. Yongeza i-garlic eqoshiwe, amakhowe othosiweyo; lonyaka ngetyuwa kunye nepepper.
• 280 g welayisi
• i-200 g yeepeps
• 500 ml yemifuno yemifuno
• 20 g yebhotela kunye ncinane ukuze i-rosives icheke
• 1 tbsp. iipuni yeoli yeoli
• ii-clove zegalikhi
• 1 tbsp. iparsley eqoshiwe
• I-Anise, ityuwa kunye nopele
Lungisa irayisi kwisikhwama. Sebenzisa zombini iintlobo zeoli ukwenza oku. Yongeza ugarlic, ityuwa kwaye ngokukhawuleza uthele umhluzi, uvuselele rhoqo. Fry kwi-bhotela yamacwecwe atyunwe ngamabhotela, uwafake kwi-risotto. Ixesha kunye ne-anise kunye nepepper. -
• 100 g yamakhowe
Iingcezu ezili-16 zesonka
• 6 tbsp. iinqwelo zeoli yeoli
Geza uze usike amacwecwe ngamakhowe. Gxotha ioli yeoli kwiincinci zesonka kunye ngokukhawuleza ujongwe kwi-pan ye-grill okanye kwi-oven uze ube mnyama. Bhuqa, ushushu, ngegalikhi. Phezulu ngamakhowe, ityuwa kunye neoli ngeoli yeoli. Phula ngeparsley ecoliweyo.
• 1 tbsp. isipuni se-aple cider viniga
Sika ii-mushroom zibe ngamacwecwe, ufefe ngeoli yeoli kunye ne-aple cider viniga. Ixesha.
Ukukhulula imini ngobisi kunye neti
Izinzuzo kunye nokulimala kweziqhamo
Ukutya okumnandi, ukulahlekelwa isisindo lula
I-Veal goulash yoNyaka omtsha
Umkhwenyana nomkhwekazi-duet okanye unxantathu?
I-chops ye-Hepatic ngeeshizi kunye nama-apula
Njani ukunqoba ukwesaba kwabantu
Indlela yokukhulisa abantwana ukuze bakhule babe ngabantu abalungileyo
I-Crochet cap kwintombazana ekwindla
Ukutya kwelayisi, ukupheliswa kweesxibisi
Iimpawu zothando lweplatonic eyimfihlo